Nei Uchishandisa CRM? Zvakanakira Vatengi Hukama Management
Muvhuro, Kukadzi 14, 2022 Muvhuro, Kukadzi 14, 2022 Douglas Karr
Ndakaona mamwe makuru eCRM achiitwa mune rangu basa… uye mamwe anotyisa kwazvo. Kufanana nechero tekinoroji, kuve nechokwadi chekuti timu yako iri nguva shoma yekushanda pazviri uye nguva yakawanda ichipa kukosha nazvo ndiyo kiyi yekuitwa kukuru kweCRM. Ini ndaona zvisina kugadzikana CRM masystem ayo akaomesa kutengesa zvikwata… uye asina kushandiswa CRMs akateedzera kudzidzira uye kuvhiringidza vashandi.
Chii chinonzi CRM?
Ipo isu tese tichidaidza iyo software inochengetera ruzivo rwevatengi CRM, izwi mutengi wehutano hwehukama inosanganisira maitiro nemaitiro pamwe nehunyanzvi. Iyo CRM system inoshandiswa kurekodha, kubata, uye kuongorora kudyidzana kwevatengi muhupenyu hwese hwevatengi. Kutengesa uye kushambadzira kunoshandisa iyi data kunatsiridza hukama uye, pakupedzisira, kukosha kweiye mutengi kuburikidza nekuchengetedza uye kuwedzera kutengesa.
Tarisa Pano Kune Yeazvino CRM Indasitiri Statistics
Ndeapi mabhenefiti Ekushandisa CRM?
Iwe une timu yekutengesa iyo inotarisira yavo yega tarisiro dhatabhesi? Manejimendi manejimendi uye vamiririri vebasa vanogadzirisa zvinyorwa zvavo zvemumwe mutengi? Sezvo kambani yako inokura, vanhu vako vanotendeuka, uye vanhu vazhinji uye vazhinji vachida kutaurirana netarisiro uye vatengi ... iwe uchaitevera sei?
Nekushandisa iyo yepakati sisitimu pakati pevatengi yekubata nekutengesa, rutsigiro, uye kushambadzira, iyo yakaunganidzwa data inova inobatsira zvakanyanya kusangano uye dhatabhesi inowanikwa kune mamwe mapuratifomu. Hedzino nzira gumi idzo masangano ari kuona kudzoka kwakanaka pane yavo CRM yekudyara mazuva ano.
Reporting pakushambadzira, kutengesa, uye kuchengetwa kunoiswa pakati-chaiko uye zvinogona kutarisirwa zvichienderana nekutenga nzendo nekutengesa mapaipi.
kusangana kune mamwe ekushambadzira otomatiki mapuratifomu, accounting mapuratifomu, vatengi data mapuratifomu, uye huwandu hwesisitimu hunogona kuwanikwa.
kushandisa michina inogona kudzora zvese kuedza uye matambudziko anokonzerwa nekumanikidza kusundira uye kudhonza kwedhata kubva kuhurongwa kuenda kuchirongwa.
Nzira inogona kuitiswa panogadziriswa makiyi makuru uye vashandi vanokodzera vanoziviswa kana mabatiro evatengi achifanira kuitwa.
Kurera mishandirapamwe inogona kuitwa kuti ibatsire kutungamira vatengi kuburikidza neyekutengesa fanera.
kasitoma kugutsikana uye chengetedzo zvinogona kuwedzera sezvo mashoma emaoko-offs anofanirwa kuitwa sema360-degree maonero emumwe mutengi ari nyore kuwana.
Vatengesi zvikwata inogona kuongororwa uye kudzidziswa kuti ikurumidze kuita kwavo. Mhinduro kubva mukutengesa dzinogona kuverengerwa kushambadzira kunatsiridza mhando uye kunongedza kwavo zvemukati uye nzira dzekushambadzira.
Marketing mishandirapamwe inogona kuongororwa nekuda kwekuita kwavo uye nekuvandudzwa vachishandisa zvikamu uye kuita kwavo zvichienderana nedata rakanyatsojeka. Sezvo inotungamira inoshandura kune vatengi, mishandirapamwe inogona kuverengerwa mushe pakutengesa, ichipa humwe huchenjeri pamhedzisiro yesarudzo yega yega.
Mikana inogona kuzivikanwa nekuitiswa sezvo sisitimu yacho ichishandiswa zvizere kuyambuka-kutengesa, kusimudzira, uye kuchengetedza vatengi.
ruzivo inochengetwa pamusoro peumwe neumwe mutengi kuitira kuti shanduko muvanhu nemaitiro asakanganisa ruzivo rwevatengi.
Kana mamaneja ako eaccount, vamiririri vevatengi, uye vamiririri vekutengesa vachinyora nenzira kwayo kutaurirana kwega kwega nemutengi muCRM yako, bhizinesi rako rine chitoro chakakosha che data chinogona kuitiswa. Vashandi vako vese vanogona kunge vachienderana uye vachinyatsonzwisisa kukosha uye nhoroondo yetariro yega yega kana mutengi. Uye, nekuteerera, kunogona kugadzirisa hukama nemutengi iyeye.
Iko kukuru kweCRM kuitisa kunofanirwa kubvumidza kune yakati siyanei yekubatanidza uye otomatiki, ivo haina kunyanyoita seinobatsira kunze kwebhokisi sezvo yako CRM yekushambadzira zvinhu zvinogona kunyepedzera ivo kunge vari.
Kana iwe uri kuisa mari mune SaaS CRM, gadzirira kuti ive huru kuvimba kune ramangwana tekinoroji kusimudzira uye bhajeti. Ita shuwa kuti iwe une sisitimu ine zviyero zvinodhura, zvinosanganisirwa netoni yemamwe masystem, uye iri kuenderera ichiwedzera zvimwe maficha kuburikidza nezvigadzirwa zvakagadzirwa uye zvekuwanikwa.
Sezvo a CRM yekumisikidza mudiwa, padiki patinoona CRM yakanyatsobatanidzwa, otomatiki, uye kushandiswa, kushoma kudzoka pane tekinoroji kudyara! CRM inofanirwa kuve mhinduro yekubatsira bhizinesi rako kuti riwedzere kushanda uye kushanda, kwete zvishoma. Sarudza chikuva uye mudiwa kuti ushandise zvine hungwaru.
Kutengesa Uye Kushambadzira Kunoda Rini CRM?
The folks at NetHunt CRM yakagadzira iyi infographic mushure mekuongorora maitiro evatengi vavo mumashure mehosha.
Nepo iyo B2B yekutengesa kutenderera inogona kureba semwedzi yakati wandei, kana usiri kurapa yako tarisiro zvakanaka, vanogona chinyararire kukusiya iwe. Kuteedzera kwevatengi kune hwakaomarara hunhu uye rako rekushambadzira dhipatimendi rinogona kuda mijenya yekudyidzana pamberi pevatungamiriri vagadzirira kuyedza-kutyaira chigadzirwa chako. Chekupedzisira, basa rakaenderana rekutengesa uye kushambadzira kwakakosha kune B2B kuitira kuti uwane kubudirira kwechokwadi kwemari Ivo vaviri vanoda zambuko tekinoroji kuti vave munzira imwechete.
4 Mazano eKugadzira Yako CRM Strategy
Vanhu vari CrazyEgg takaisa pamwechete iyi infographic nemamwe matipi makuru pamatanho mana ekuronga yako CRM Strategy… Vision, Ongorora, Batanidza, uye Data.
Tags: mabhenefiti e crmcrazyeggCRMcrm infographiccrm strategymutengi wehutano hwehukamaenthunt crmchiratidzochii chinonzi crmnguva yekudyara crmnei crm yakakoshasei kushandisa crmnei uchishandisa crm
Matanho Mashanu Aunogona Kutora Nhasi Kuti Uwedzere Yako Kutengesa Amazon